श्रीलंका संकट : किन दिइयो सरकारी कर्मचारीलाई हप्तामा एक दिन बढी बिदा ? | आर्थिक अभियान
श्रीलंका संकट : किन दिइयो सरकारी कर्मचारीलाई हप्तामा एक दिन बढी बिदा ?
असार १, कोलम्बो । श्रीलंकाको सरकारले खेतिपाती गर्न सरकारी कर्मचारीहरुलाई हप्तामा थप एक दिन बिदा दिने भएको छ । देशभर खाद्यान्न संकट चुलिएको र अवस्था झनै विकराल बन्ने भयबीच सरकारले यस्तो पहल गर्न लागेको हो ।
२ करोड २० लाख जनसंख्या भएको श्रीलंकामा झन्डै १० लाख हाराहारीमा सरकारी कर्मचारी छन् । अहिले श्रीलंकाले स्वतन्त्र भएयताकै खराब खाद्य संकट बेहोरिरहेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति सुकेपछि सरकारसँग खाद्यान्न, इन्धन र औषधिलगायत अत्यावश्यक सामान आयात गर्ने विदेशी मुद्रासमेत छैन ।
यस्तोमा सोमवार अबेरतिर सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई आगामी तीन महीनासम्म हरेक हप्ता शुक्रवार बिदा दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । इन्धन अभावबीच कर्मचारीहरु काममा फर्किन समस्या भइरहेको छ । त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई मद्दत गर्न तथा उनीहरुलाई आफू र आफ्ना परिवारका सदस्यका लागि आवश्यक फलफूल र तरकारी उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्न सो निर्णय गरिएको हो ।
सरकारी कर्मचारीहरुलाई हप्तामा एक दिन बिदा दिएर उनीहरुलाई आँगन, खेतबारी वा अन्यत्र कृषि गतिविधिमा संलग्न हुन आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन उपयुक्त रहेको सरकारले आफ्नो अनलाइन न्यूज पोर्टलमा पोष्ट गरेको एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ । भविष्यमा हुन सक्ने खाद्य अभावको समाधानका लागि सरकारले यो उपाय अपनाएको हो ।
सोमवार नै अमेरिकाले श्रीलंकालाई मद्दत गर्न आफू तयार रहेको बताएको छ । श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रेमेसिंघेले अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्थोनी ब्लिङ्केनसँगको फोनवार्ता गरेपछि अमेरिकाले सहयोगका लागि तयार रहेको बताएको हो । यो महीनाको शुरुमा विक्रेमेसिंघेले आफ्नो देशलाई आगामी ६ महीनामा अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न कम्तिमा ५ अर्ब डलर चाहिने बताएका थिए । एजेन्सी